ब्रत बसेको दिन यौनसम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ?
एजेन्सी । व्रत बसेको दिन यौनसम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? हिन्दू धर्मशास्त्रमा महिला व्रत बसेको दिन यौन सम्पर्क गर्न नहुँने उल्लेख छ । दिनभर भगवानको नाममा उपवास बसेकी महिलामाथि सहवासको कुरा सोच्न पनि नहुने हिन्दूशास्त्रमा उल्लेख छ ।
किन बेलायती युवाहरु सेक्स गर्दा कण्डम नै प्रयोग गर्दैन् ?
एजेन्सी । बेलायतमा गरिएको एक सर्भेक्षणका अनुसार १६ देखि २४ बर्ष उमेर समूहका झण्डै ५० प्रतिशत युवाले पहिलो पटक सेक्स गर्दा कण्डम प्रयोग गर्दैनन् । किन गर्दैनन ? यसको कारण भने यस्तो छ, धेरै जसोले कण्डमले यौनको स्वादलाई फिक्का गरिदिने अर्थात कण्डमले यौन आनन्दमा कमि ल्याउने बताएका छन् ।
अश्लिल भिडियो हेर्नेको दिमागको आकार घट्दै जान्छ : अनुसन्धान
एजेन्सी । आजभोलि १३ वर्षदेखि नै किशोर किशोरीले नियमित रुपमा अश्लिल भिडियो र तस्बिर हेर्ने कुलतमा फसेको पाइन्छ । तर, नियमित यस्ता भिडियो हेर्नेको दिमागलाई भिडियोले दिमागमा असर गर्ने गरेको एक नयाँ अध्ययनले खुलासा गरेको हो । अश्लिल भिडियो हेर्नेको दिमागको आकार घट्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका हुन् ।
एजेन्सी । सम्भोगका क्रममा लिंग भाँचिएको प्रसंग बेलाबेलामा सुन्न पाइन्छ । लिंग भाँचिएकामध्ये अधिकांशले गुपचुप उपचार गराउँछन् । तर, अमेरिकी नागरिक रस एसडोरियन यस मामिलामा अरुभन्दा भिन्न छन् । लिंग भाँचिएको पीडादायी क्षण भोगिसकेको उनी अरुलाई आफ्नो जस्तै नियति भोग्नबाट बचाउने अभियानमा जुटेका छन् ।